ပြည့်ဖြိုး (နည်းပညာမျှဝေခြင်း): Google Play ကို မြန်မာပြည်မှ Access လုပ်ခွင့်ရစေရန် တောင်းဆိုခြင်း
Google Play ကို မြန်မာပြည်မှ Acces
s လုပ်ခွင့်ရစေရန် တောင်းဆိုရာမှာ အခုပြောမယ့် နည်းလမ်းနဲ့တောင်းဆိုခြင်းကပိုမိုထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ အကြောင်းက Google Play ဆီဝင်ရောက်ရာမှာ Problem ရှိခဲ့ရင် ၊ Error ရှိခဲ့ရင် Google Play Team ဆီတိုက်ရိုက် အီမေလ်းပို့တောင်းဆိုနိုင်တဲ့
စာမျက်နှာမှာ တိုက်ရိုက်သွားပြီး အောက်မှာရေးပေးထားတဲ့ တောင်းဆိုစာ ကို ပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းကပိုပြီးထိရောက်မှုရှိတဲ့အချက်ကတော့ ဒီ page မှာဝင်တောင်းဆိုဖို့အတွက် Google ရဲ့ Login စာမျက်နှာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Gmail Account နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးမှ တောင်းဆိုစာရေးရမှာဖြစ်လို့ Google မှာတရားဝင် account လုပ်ထားတဲ့ Google Users တစ်ဦးအနေနဲ့တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် အခုပြောမယ့်နည်းလမ်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ.. ဒါဆို လုပ်ဆောင်ရမယ့် step တွေကိုပြောပြပေးပါ့မယ်။
အဆင့် (၁) - http://support.google.com/googleplay/bin/request.py?contact_type=apps_accessingplay_other
အဆင့်(၂) - မိမိရဲ့ Gmail Account ဖြင့် Sign in ၀င်ရောက်ပါ။
အဆင့် (၃) - အောက်ပုံထဲကအတိုင်း မိမိရဲ့အမည် ၊ တောင်းဆိုရမည့်စာသားကို ဖြည့်စွက်ပါ။ တောင်းဆိုရမည့်စာသားကို
အောက်မှာ တစ်ခါတည်းရေးပေးထားပါတယ် ။ အဲဒါကိုပဲ copy ကူးပြီးထည့်ပေးလိုက်ပါ။
We are Android Users from Myanmar. Many people in Myanmar use your android OS. We want to use Google Play from our Android Phones. But We can't use Google Play. We just want to access Google Play from our Country (Myanmar). Please allow us to use your applications by removing the ban on us. We hope you will consider our request.
(အထက်ပါစာသားကိုအောက်ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း Issue Description အကွက်တွင်ထည့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။)
အဆင့် (၄) - ပြီးလျှင် Submit ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် (၅) - Your Email has been submitted ဆိုတဲ့စာသားနဲ့ Page တစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုရင် တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။
( ဒီနည်းကို Myanmar Mobile App မှကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားပါတယ်။ Google Play ရဲ့ Google Play Help ကနေ ရှာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်ကိုယူသုံးလိုပါက Myanmar Mobile App ကိုလည်းCredit လည်းပေးစရာမလိုပါ။ မြန်မာပြည်မှ Android Users အားလုံးကောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုက်သလိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ မိမိတို့စိတ်ကြိုက် share နိုင်ပါတယ်။ )
အခြား ဖုန်းသုံးစွဲသူများလည်း ၀င်ရောက်တောင်းဆိုပေးနိုင်အောင် ဒီပို့စ်လေးကို share ပေးစေချင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှ Android Users များအားလုံး Google Play ရဲ့ features များကိုအသုံးပြုခွင့်ရရှိကြပါစေလို့ Myanmar Mobile App Store မှဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Reference and Credit to -Myanmar Mobile App
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:46 PM